Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxa soo waajahay walwal siyaasadeed, ka dib markii Baarlamaanka loo gudbiyay mooshin ay xildhibaano saxeexeeno oo xilka lagaga qaadayo. - Haldoor News | Haldoor News
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxa soo waajahay walwal siyaasadeed, ka dib markii Baarlamaanka loo gudbiyay mooshin ay xildhibaano saxeexeeno oo xilka lagaga qaadayo.
Muqdisho (Haldoornews)-Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxa soo waajahay walwal siyaasadeed, ka dib markii Baarlamaanka loo gudbiyay mooshin ay xildhibaano saxeexeeno oo xilka lagaga qaadayo.
Mooshinkan oo uu hor boodayo xildhibaanka aftahanka ah ee galaangalka badan Cabdi Xoosh, waxa saxeexay 93 xildhibaan, waxaanay Xasan Sheekh ku eedaynayaan lunsi hanti badan iyo maamul xumo, waxaanay Baarlamaanka ka dalbanayaan in lagu sameeyo xil ka qaadis. Shirguddoonka Baarlamaanka ayaa mooshinkan oo xawaare ku socda qaabilay, waxaanay war-murtiyeed ay soo saareen ku cadeeyeen inay xildhibaanada ka guddoomeen mooshinka. Mooshinkan Xasan Sheekh ka dhanka ah, waxa la aaminsanyahay inuu ka dhashay ka dib markii uu dhawaan galangal siyaasadeed oo uu sameeyay uu hay’adaha dawladiisa ka saxeexay inay ku dhawaaqaan inaanay doorasho Somaliya ka qabsoomi karin sannadka 2016. Dhawaaqaas waxa si adag uga horyimid oo qaadacay wadamada Somaliya dusha ka maamula. Labadii habeen ee u dambeeyay isagoo culayska mooshinkan dareensan wuxuu Madaxweynaha Somaliya bilaabay inuu kala xod-xoto xildhibaanada Baarlamaanka oo uu ku kala kaxeeyo lacag iyo balan qaad mansabyo siyaasi ah. Hase yeeshee dhinacyada ka soo horjeeda ee mooshinka wata ayaa iyaguna dhinacooda ka wada abaabul iyo si kasta oo ay ku hirgelinayaan mooshinkooda. Dadka siyaasadda lafo-gura ayaa aaminsan in Xasan Sheekh ka badbaadi doono in xil ka qaadis lagu sameeyo, balse uu ku badbaadi doono faro cididood, waxaanu wixii markaas ka dambeeya u dhego nuglaan doona beesha caalamka iyo shakhsiyaadka mooshinka soo abaabulay.